Home Wararka Bandowga Qoorqoor ee Dhusamareeb Xaaf Ma u Diidi karaa inuu u Tartamo...
Bandowga Qoorqoor ee Dhusamareeb Xaaf Ma u Diidi karaa inuu u Tartamo Sanadka?
Isagoo og in rag badan oo muhiim ay ku soo qulqulayaan magaalada ayuu Qoorqoor isku dayayaa inuu magaalada ku soo rogo Bandoo uu ugu hiillinayo Cabdi Qeybdiid iyo Rooble, taas oo Meesha ka saareysa hadalkii Gacal ee boolaxooftada ahaa ee uu ku sheegayey inaan aqalka sare qofna loo xeri Karin oo dhammaan murashaxiinta aqalka sare oo nasiibxumoku xeran inuu soo magacaabo Qoorqoor inay ku tartamaan si xor.
Khaladka Ku jira doorashada Aqalka Sare.
Magcaabista waxaa iska leh MW Maamul goboleedka taas oo ah caddaalad darro weyn oo qofkii saacad uu qoonsaday uu ka reebi karo iyo qarankaba ku ah gef iyo liidnimo ah , waana sababta keentay inuu qolkiisa fadhiga ka soo magacaabo Lafta Gareen rag ay Ooryo walaal yihiin iyo Gabar uu adeer u yahay.
Qofku kuma dacwoon karo waa la iga reebay liiska murashixiinta u taagan doorashada aqalka sare ee waxay dacwadiisu bilaabaneysaa marka liiska lagu soo daro oo uu doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dooranayo uu saluugo, aakiin muxuuba saluugaa haddaanba garoonka loo ogolaan iyo inuu tartamo?
Haddaba Axmed Qoorqoor oo raba inuu Cabdi Qeybdiid iyo Dhegdheer u xero aqalka sare ka mid noqoshadiisa ayaa waxaa uu soo saaray ammarro uu uga hortagayo inay murashixiinta raba xilka la ogaado taageerada ay dadkooda dhexdiisa ku leeyihiin. Magaalada Bandoo ma ahayn markii shabaab hareeraha ka fadhiyey?
Axmed Ducalle Xaaf oo aan isaga laftiisa sida uu u qeylo weyn yahay u wax qabad badneyn ayaa waxaa lagu wadaa in bannaanka la dhigo oo looga hilliyo Cabdi Qeybdiid oo ay wada wataan Qoorqoor, Rooble iyo Farmajo, inkasta oo uu Farmajo cabsi ka qabo ogyahayna inaan Qeybdiid la iska halleyn Karin, inkasta oo uu macaankiisa iska. Dhuuqayey afka iyo dhegahana xertay ilaa markii xaaskiisa musqusha lagu jebiyey ceeb looma dhintee.
Xaaladda Bandowga iyo hub laguma wadan karo Dhuusamaree maaha mid wanaag iyo ammaan looga jeedo ee waa xikmaddii Cali Bin Abii Dhaalib rc ee ayahd waa erayo sax laakiin dulmi looga jeedo. Qoor wuxuu ka cabsanayaa in Xaaf uu la yimaado Dhuusamareb awood ciidan oo keenta in aan laga reebi Karin liiska Murashaxiinata aqalka Sare.
Maxaa loogu diidan yahay liiska in lagu daro Xaaf?
Waxaa cad inuu ka guuleysanayo haddii Cabdi qeybdiid lala tartansiiyo, waayo xildhibaanada iyo reer Galmudug waxaa ku awood badan Xaaf, waana cabsida Qoorqoor iyo Rooble ay qabaan inuu Cabdi Qeybdiid uu halkaas ku waayo Sanadka, halkaasna ay ku soo afjaranto taariikhdii dhereyd ee dagaale-ogenimo ee Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid. Dagaalka waxaa isagana ka maqneyn oo qeyb weyn ka ah Cabdikariin Xuseen Guuleed oo laba fashil kadib, haddana mid sedexaad raadinaya, balse dooraanka raba inuu qaranka oo dhan fashiliyo waan sababta loo soo wado Cabdi Qeybdiid.
Dhinaca kale, waxaa jira isagana tartan ka dhaxeeya Dhagdheer, SH. Yusuf Cali Ceynte iyo Jaahweyn waaana mid adag haddii la isku daayana waxaa loo baqaa inuu halkaas ka soo baxo Sh Yusuf Cali Ceyne, waxayna taas abuureysaa in laba qof hal mar ay waayaan NN oo kala dego kuwaas oo kala ah Dhegdheer oo kursiga senedka ka qaadanayo iyo Xuseen Iidow uu xigtanimo ama jufo ahaan bannaanka ku tuurayo inkastoo ay hadda yihiin kuwa u isha ku haya Xasan Kheyrlaawe, waana sababta adkeyn doonta kursigan.
Galmudug ma sahlana hawsheeda, waxaana ay mar waliba ahayd meel xoog wax lagu kala qaato waana sida Kheyre (Kheyrlaawe), Fahad iyo Farmajo ay ku keeneen Qoorqoor. Marka Xaaf ma iska xaroon doonaa misa waxaa isku mid noqon doona doorkaan Qeylidiisa weyn iyo wax qabadkiisa oo kursiga waa ku adkaan doonaa?